10.03 Manavaka ny madio sy ny maloto
Ny sakafom-panahintsika anio Sabotsy 10 Marsa 2018 dia ny Levitikosy 11.1-23, no teny hovakiantsika ka hojerentsika amin' izany ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin ' izao tenin' Andriamanitra izao ? sy ny hoe misy andin-tSoratra Masina hafa ve mety hanampy na hameno na ampahazava izay novakiantsika androany ?
1 Ary Jehovah niteny tamin’ i Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe :
2 Mitenena amin’ ny Zanak’ Isiraely hoe : Izao no ho fihinanareo amin’ ny biby rehetra ambonin’ ny tany :
4 Kanefa amin’ izay mandinika sy mivaky kitro dia izao kosa no tsy ho fihinanareo : Ny rameva, satria mandinika ihany izy, nefa tsy mba mivaky kitro : maloto aminareo izy;
5 ary ny hyraka, satria mandinika ihany izy, nefa tsy mba mivaky kitro: maloto aminareo izy;6 ary ny rabitro, satria mandinika ihany izy, nefa tsy mba mivaky kitro; maloto aminareo izy;
8 Ny henan’ ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy hokasihinareo akory; zava-maloto aminareo ireny.
9 Ary amin’ izay rehetra ao anatin’ ny rano dia izao no ho fihinanareo : Izay rehetra misy vombony sy kirany ao anaty rano, na ao anatin’ ny ranomasina, na ao anatin’ ny ony, no ho fihinanareo;
10 fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa, na ao anatin’ ny ranomasina, na ao anatin’ ny ony, na amin’ izay rehetra mihetsiketsika ao anaty rano sy amin’ ny zava-manan-aina izay ao anaty rano; fahavetavetana aminareo ireny;
13 Ary izao no ho zava-betaveta aminareo amin’ ny vorona ka tsy ho fihinanareo, fa zava-betaveta izy : ny voltora sy ny gypa sy ny ankoay
21 nefa izao kosa no ho fihinanareo amin’ ny zava-mandady izay manana elatra sady mandia tongotra efatra, dia izay manam-pingotra ambonin’ ny faladiany hitsipihany eo amin’ ny tany.
22 Amin’ ireny dia izao no ho fihinanareo; ny valala, isan-karazany, ny solama, isan-karazany, ary ny hargola, isan-karazany, ary ny hagaba, isan-karazany.
MANAVAKA NY MADIO SY NY MALOTO
Mampianatra Andriamanitra :
Tamin’izay fomba nifandraisan’Andriamanitra tamin’ny zanak´Isiraely fahizany dia nampiasainy ny biby ka nosokajiany ho karazany telo:
- Ireo voatokana azo atao fanatitra ankasitrahany,
- Ireo madio nomeny ho fihinana.
- Ary ireo maloto.
Na ny biby mandeha an-tanety, na ny any anaty rano, na ny manidina eny amin’ny habakabaka dia misy nataon’Andriamanitra ho madio sy maloto.
Nataony mazava ny fomba hanavahana izany.
Biby no nasain’Andriamanitra ataon’ny olona fanatitra mba hihavanana sy hifandraisana ary hahazoana sitraka aminy.
Biby koa no nampianarany azy mba hahay hanavaka amin’ny fiainany ny madio sy ny maloto, ny anakasitrahany sy ny fahavetavetana eo imasony.
Ampianarin’ny Tompo ny olony mba "hanavaka ny zava-tsoa hiala amin’ny zava-poana" (Jeremia 15.19).
Tsy araka izay heverina nahifaneken’ny olona ho tsara sy ratsy anefa fa araka izay lazain’Andrimananitra.
Nodiovin’Andriamanitra ny biby rehetra :
Rehefa maty teo amin’ny hazofijliana i Jeso Kristy, Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra, ho fanatitra indray mandeha tena nankasitrahin’Andriamanitra, dia tsy nila nanao fanatitra biby na zavatra hafa intsony ny olona.
Rehefa mino sy mandray an’i Jeso marina ny olona dia itoeran’ny ny Fanahy Masina dia mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ary omeny hery hifidianana sy hanaovana ny tsara araka an’Andriamanitra.
Tsy ilaina intsony ny fanavahana ny madio sy ny maloto noho izany ka dia nataon’Andriamanitra ho madio avokoa ny biby rehetra. (Asa 10.9-16)
Ny biby madio sy maloto dia endrikin'ny zanak’Isiraely, firenena nofidin’Andriamanitra manokana sy ny firenena jentilisa.
Ao amin’i Kristy kosa ankehitriny dia
tsy misy jiosy na jentilisa intsony
Soratra masina ho an’ny herinandro :
Dia hoy Mosesy tamin’ i Arona :
Izany dia ilay nolazain’ i Jehovah hoe :
Amin’ izay akaiky Ahy no hisehoako ho masina,
ary eo anatrehan’ ny olona rehetra no hampisehoako ny voninahitro.
Dia sina Arona.
Anio Asabotsy isika dia hivavaka ho an'ny asa fanompoana eo anivon'ny mpivady sy ny fianakaviana.